ခိုင်ခိုင်စောလွင်: August 2015
" မျက်နှာအရေပြား ထူသလား၊ ပါးသလား " ၃၁- ၈- ၂၀၁၅ ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၄) အမှတ်( ၃၃) မှ
နာမည်ကျော် လွှတ်တော်အမတ် တစ်ယောက်က ၂၀၁၅ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက (၂၆%) ပဲ နိုင်၊ လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ စစ်သား (၂၅%) နဲ့ပေါင်းပြီး အစိုးရဖွဲ့လို့ ရပြီလို့ ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် စတေးတပ်စ်အောက်မှာ ဆဲသံတွေ သောသောညံ သွားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီစကားကို ပြောလိုက်တာဟာ သူနဲ့တကွ သူ့ပါတီ တစ်ခုလုံး မတရားမှုကို လုပ်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲဆိုတာ သူ့ဖာသာပင် သိရဲ့လားလို့ တွေးမိပါတယ်။ တလက်စထဲမှာပဲ မတရားတဲ့သူတွေ အနိုင်မရအောင် NLD ပါတီကို ရာနှုန်းပြည့် မဲပေးဖို့ အမှန်ပင် လိုပြီဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။
မတရားတာကို တရားတယ်လို့ ထင်မှတ်နေတာကိုက မတရားမှုကို ကျူးလွန်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ NLD အမျိူးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် ဥက္ကဌ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သန်လျင်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲမှာ လူထုထဲက အဲဒီအချက်ကို မေးတာမှာ အခုလို ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ် (၂၆%) ရှိရင် အစိုးရဖွဲ့လို့ ရတယ်လို့ ပြောတာဟာ တပ်မတော်ကို စော်ကားတာပဲ၊
ဘယ်လို စော်ကားတာလဲဆိုရင် တပ်မတော်ကို ပါတီတစ်ခုရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင် တပ်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တာပဲ။
၂၁. ၈. ၂၀၁၅
လူထုခေါင်းဆောင်က အသိဉာဏ်ကြီးသူပီပီ၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ပါးနပ်စွာ ဖြေကြားခဲ့ပေမယ့် အဲဒီလွှတ်တော်အမတ်က
" ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီးမခံချိမခံသာဖြစ်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေန့က တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေး မဲ ကွဲ သွားမှသာ NLD အနေနဲ့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ့်အနေအထားကနေ ဦးရွှေမန်း ပ ထုတ်ခံရပြီးနောက်မှ ကျနော့်ထင်မြင်ယူဆချက်အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာပြီး NLD ရဲ့ ရည်မှန်းချက်မှေးမှန်ပျောက်ကွယ်သွားလို့ တပ်ကိုခါးပိုက်ဆောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီး ကျနော့်အပေါ် စွပ်စွဲလာတာဖြစ်ပါတယ် တပ်ကို ခါးပိုက်ဆောင်လုပ်ဘို့ရာမှာလည်း တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေက ငထုံငအ ပူတူတူးလေးတွေမှမဟုတ်တာဗျာ ကျနော်နဲ့တပ်နဲ့ကိုအဲလိုအကွက်ရိုးကြီးနဲ့ ရန်တိုက်ပေးလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး ရိုးရှင်းစွာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါ ဒါပါဘဲ ။ အော် ဒါနဲ့ သွားပါပြီဟုတ်မှာပါဘဲ လို့စိတ်ပျက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲတော့မဝင်ဘဲမနေပါနဲ့ဦးနော် ဖမ်းကုတ်စရာ ဒေါင်းတွေဘာတွေမရှိဘဲ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ထဲတောကစားနေရရင် ပျင်းစရာကောင်းနေမှာစိုးလို့ပါ ။" လို့ အင်မတန် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ကလေးကလားဆန်စွာ တုံ့ပြန်တာကို ဖတ်ရပါတယ်။
ဒီလိုလူမျိူးတွေ စုစည်းထားတဲ့ ပါတီ တစ်ရပ်အနေနဲ့ မတရားမှုပြုဖို့ဟာ သူတို့ အတွက် ရှယ်ဖွယ်မဟုတ်လို့ ယူဆနေပြီလို့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်တဲ့ အပြင် ဒါ့ကြောင့်လည်း လူထုခေါင်းဆောင်က သန်လျင်ဟောပြောပွဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိမယ့် ပါတီကို အာဏာ အေးအေးဆေးဆေး လွှဲပြောင်းပေးတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါစေလို့ ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
" အရေးကြီးတာက စိတ်နေစိတ်ထားဖြစ်တယ်၊ ဒီမိုကရက်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ မှတ်ကျောက်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အာဏာကိုရအောင် ဘယ်လိုယူနိူင်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်မဟုတ်ပါဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ အရှုံးကို လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန် ဘယ်လို ခံယူသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှုံးသွားရင် နောက်တစ်ကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲအထိ စောင့်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဆီမှာ ဒီမိုကရက် စိတ်နေစိတ်ထားတွေ မရှိသလောက် အားနည်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်၊ ( ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲက သက်သေခံပါတယ်)၊ အာဏာကို တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနည်းလမ်းနဲ့ ယူရတယ်၊ ရှုံးသွားရင် နောက်ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ရတယ် ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရက်စိတ်ဓါတ်တွေကို မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချူပ်တွေ နားလည်လက်ခံ သဘောပေါက်တဲ့နေ့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီရမယ့်နေ့ပါပဲ " လို့ စာရေးဆရာ ညီစောလွင်ရဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရမယ့်နေ့ ဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရတာကို ပြန်ပြောင်းသတိရမိပါတော့တယ်။
ဒီနေရာမှာ အတုယူစရာနဲ့ သတိထားဆင်ခြင်စရာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို အမှတ်ရစေပြန်ပါတယ်။ အနှစ်(၈၀) သက်တမ်းရှိတဲ့ ထိုင်းနိူင်ငံဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာ (၁၈) ကြိမ်ရှိတာ ထူးခြားပါတယ်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာ ဝန်ကြီးချူပ်ဟောင်း သက်ဆင်ရဲ့ ဩဇာမကင်းသူ၊ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံ လုံးဝမရှိသူ သက်ဆင်ရဲ့ နှမ ယင်လတ်ကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီး ဖွေထိုင်းပါတီ နာမည်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရခဲ့တာမှာ စစ်တပ်က ပြည်သူလူထု ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို လက်ခံပါမယ်လို့လည်း ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာ သက်ဆင့်လက်က အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ စစ်တပ်က သက်ဆင်ရဲ့ နှမကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ပင် လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရက်ပါတီက ဝန်ကြီးချူပ်အဘီဆစ်က အသာတကြည်ပဲ ဆင်းသွားပေးပြီး အတိုက်အခံအနေနဲ့ ဆက်ပြီး ရှိနေပါမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ယင်လတ်ဝန်ကြီးချူပ် သက်တမ်းနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ ယင်လတ်ဟာ သူ့အကို ပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို အောက်လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ အတွက် လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်လာပါတယ်၊ ဥပဒေကြမ်းကို အထက်လွှတ်တော်က ပယ်ချခဲ့ပေမယ့် အကြီးဆုံးအတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်ပါတီက လွှတ်တေ်ာကို အယုံအကြည်မရှိဆိုကာ သပိတ်မှောက် ကျောခိုင်းထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက် လွှတ်တော်လည်း ထျက်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ ဝန်ကြီးချူပ်က အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ကြားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ ပြောပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ယင်လတ်ကို အာဏာအလွဲသုံးစားမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ ရာထူးက ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး ပီး စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ယနေ့ ထိုင်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မြန်မာဗိုလ်ချူပ်တွေနဲ့ အလွန်နီးစပ်တယ်၊ မြန်မာဗိုလ်ချူပ်တွေလို အာဏာကိုလက်မလွတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်လေမလား ဆိုတဲ့ သံသယတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ အခြေခံဥပဒေကို ပညာရှင်အများနဲ့ ရေးဆွဲနေပြီး တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးပါက ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
အာဏာသိမ်း စစ်ဗိုလ်ချူပ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝန်ကြီးချူပ် ပရာယွတ်ကတော့ သူ့ရဲ့ အပတ်စဉ် သောကြာစကားပြောခန်းမှာ " မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်စေ့နှစ်လုံးပွင့်တာနဲ့ ကျတော်တို့ကို ဆဲတာတွေ တွေ့နေကြားနေရတာ ဘယ်သူက လုပ်ချင်မတုန်း၊ အားလုံး ငြိမ်ငြိမ်နေကြ၊ အားလုံး အေးအေးဆေးဆေး နေပါမှ အစိုးရအဖွဲ့ လုပ်ရပ်တွေ မြန်ုမြန်ခရီးရောက်မယ်၊ ငြိမ်ငြိမ်မနေရင်တော့ ကြာသွားမယ်၊ မြန်မြန်လိုချင်ရင် ငြိမ်ငြိမ်နေကြလို့" ခပ်တည်တည် ပြောသွားပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံငံမှာ မကြာမီ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တော့မယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ရော ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာမလားဆိုပြီး မိတ်ဆွေ ထိုင်းဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လတ်တလော စစ်တပ်ကအာဏာယူထားပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ၊ သူတို့တိုင်းပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ယဉ်ပါးနေတာ ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူတွေရော၊ အုပ်ချူပ်သူ၊ စစ်တပ်ပါ ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အစဉ်အလာကို လိုက်နာကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့သူကို လက်ခံကြောင်း၊ ပြည်သူ့အတွက်ရှေ့ရှုတာ အစဉ်အလာပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြောရင်း တလက်စထဲ ထိုင်းလူမျိူးတွေက မျက်နှာအရေပြားပါးတယ်လေလို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းလူမျိူးတွေက ရှက်စရာကို ရှက်စရာလို့ မြင်တယ်၊ မတရားလုပ်ပြီး ရတာကို ယူဖို့ ရှက်တတ်ကြတယ်၊ လူတွေ ရှက်တဲ့အခါ အရေပြားပါးတဲ့ သူက မျက်နှာကိုနီရဲသွားတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါ့ကြောင့် ထိုင်းလူမျိူးတွေက ရှက်တတ်တာကို အရေပြားပါတယ်လို့ ပြောတာလေလို့ သူ့စကား အဓိပ္ပါယ်ကို ကို သူကပဲ ထပ်ရှင်းပြပါတယ်။
မြန်မာပြည်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက မျက်နှာအရေပြား ထူသလား၊ ပါးသလားတဲ့၊ သူကြားဖူးတာကတော့ တိုင်းပြည်အာဏာကို ပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ ပါတီကို မပေးပဲ သူတို့ယူထားတယ်။ ပြည်သူတွေအကျိူးကို မလုပ်ပဲ သူတို့အကျိူးစီးပွားပဲလုပ်လို့ သူတို့တွေ ချမ်းသာကြတယ်။ ပြည်သူတွေဆင်းရဲကြတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆွဲတာ (၂၅)နှစ်ကျော်တောင် ကြာတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ် လို့ ဆက်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်စလုံး တပြိုင်ထဲပဲ သူတို့က အရေပြားထူသူတွေ ထင်ပါရဲ့ လို့ ပြောရင်း ရယ်မိကြတယ်။ သူနဲ့အတူ လိုက်ရယ်ပေမယ့် သူများတိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ယှဉ်ပြောတာမှာ အောက်ကျမခံချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ စိတ်ထဲမှာ မခံချင်စိတ်တော့ ဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိူးကို အထင်သေးနှိမ့်ချတဲ့ စကားဆိုရင် မှန်တာပြောရရင် မကြားချင်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် မိတ်ဆွေ ဆရာမကို တစ်ခွန်းတော့ ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်။ မကြာခင် ၂၀၁၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှာ လုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကို စောင့်ကြည့်ပြီး မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချူပ်တွေ မျက်နှာအရေပြားပါးသလား ထူသလားဆိုတာကို ပြန်ပြီးအဖြေပေးချင်ပါတယ်လို့ ပြန်ပြောဖြစ်အောင်ပြောလိုက်မိပါတယ်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 8:39 PM No comments:
ညီညွတ်မှ ဖြစ်မည် ၂၄. ၈. ၂၀၁၅ ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၄) အမှတ်(၃၂)မှ
"ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မဲထည့်ပါ၊ ပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရယ် နာမည်ရယ် လည်း မကြည့်နေပါနဲ့၊ ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိမယ် ဆိုးတဲ့လူလည်းရှိမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့လူတွေ ပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်မယ်၊ ကျမတို့ဟာ ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ၅၂ သန်းကျော်ရဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့် ရှိမှတော့ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ထောင်လောက်တော့ ကောင်းကောင်းလေးနိုင်တယ်"
လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလက ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စဉ် ဖဆပလ အဖွဲ့ ဥက္ကဌ လူထုခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားချက်နှင့် ယနေ့ကာလ အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ဥက္ကဌ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်စုကြည် မကွေးတိုင်း မင်းဘူးမြို့မှာ ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားနှစ်ခုကို အဖန်ဖန် ပြန်ဖတ် ပြန်နားထောင်ရင်းက လူထုခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် စေတနာစကားကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်မိလေသည်။
ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းက မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေး ရအောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးမည်၊ လွတ်လပ်ရေးကျိန်းသေရကို ရရမည်၊ ဘယ့်လောက် ကျိန်းသေသနည်းဆိုသော် တစ်နှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေးရရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့အတွက် သူ့ဖက်က အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမည် ဖဆပလ ကို ပြည်သူအားလုံးက မဲပေးရမည်ဟု အပြတ်ပြောခဲ့တာဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်မှာလည်း အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၁၅ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင် အမျိူးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ်ကိုသာ မဲထဲ့ပါ၊ ကျန်တာ သူတို့ တာဝန်ထားလို့ ထပ်တလဲလဲ ပြောသည်။ ဒီမိုကရေစီလိုချင်သလား NLD ကိုသာမဲထဲ့ပါလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်သည်။ ပါတီအနိုင်ရပါမှ ပြည်သူတွေလိုချင်သော စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ ဖြောင်ဖြောင့်တန်းတန်း သွားနိုင်ပေမည်။ မည်သည့်ပယောဂမှ မစွက်ပဲ ခေါင်းဆောင်ပြောသည့် စကားကို တည့်တည့်မတ်မတ် စဉ်းစားပါက အဖြေကရှင်းပါသည်။ ရိုးစင်းပါသည်။ စေတနာမှန် ဖြင့် အမှန်အတိုင်းပြောတာကို ပကတိအတိုင်း လက်ခံက ဟုတ်တာပေါ့ ဖြစ်မည်။ သို့သော် ယခုကာလကလေးမှာ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ စကားကို မလိုသူတို့က ချဲ့ကား တွေးခေါ် ၊ ဖြတ်ထုတ် ဝေဖန်ကြရာ လမ်းလွဲသွားကြမည့် အရေးကို စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိရပါသည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနာမည် မကြည့်ပဲ ပါတီနာမည်ကို ကြည့်ပါ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အထအန ကောက်ကာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအချိူ့  ၏ချွတ်ယွင်းချက် အားနဲချက်တို့ကို ထောက်ပြဝေဖန်ကာ ဒီလိုလူတွေကို မကြိုက်ပဲ ပါတီကို မဲပေးရမလားဆိုသည့် အသံတွေ ထွက်လာလေသည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေ အုံနှင့်ကျင်းနှင့် မဲပေးလိုက်သည်မှာ ထိုစဉ်က NLD အမှတ်အသား ခမောက် တံဆိပ်ကိုသာဖြစ်သည်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်ပင် ကိုယ့်မြို့နယ်က ကိုယ်တိုင်မဲပေးခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မည်သူမည်ဝါဆိုတာ အခု ပြန်စဉ်းစားတော့ မသိတော့ပေ။ ဘယ်သူရယ်လို့ မဲပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပဲ အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် နိုင်ရမည်ဆိုသည့် စိတ်ဖြင့် ခမောက်ကိုသာ အမှန်ခြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က NLD အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် တောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှာရော မြန်မာပြည်မှာပါ ခေတ်စနစ်တွေ ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် အနိုင်ရရှိရေးသည် အထူးပင် အရေးကြီးပေသည်။ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အနေဖြင့် ယခင်ကလို မတရားသည့်လုပ်ရပ်များ ဖိနှိပ်ထားတာမျိူးလုပ်ဖို့ အခွင့်မသာတော့ပေ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေ လိုလားသည့် စစ်မှန်သည့် အပြောင်းအလဲ အတွက် လိုအပ်တာ ဒါလို့ ဆိုက ပြည်သူတွေ သဘောပေါက်မည်ထင်ပါသည်။ မြန်မာလူမျိူးတွေသည် ပင်ကိုသဘာဝအရ ရိုးတာသာရိုးမည်၊ ခပ်တုံးတုံးတော့ မဟုတ်ကြပေ။
လူထုခေါင်းဆောင်ပြောစကားကို ပကတိအတိုင်း ဟုတ်တာပေါ့လို့ လက်ခံမည့်အစား သွေးထိုးစကား ပြောသည်များမှာ ယခင်အစိုးရလက်ထက် အပုပ်ချဝေဖန်သူတို့နှင့် အလားသဏ္ဍန်တူလွန်းလှပေသည်။ လွန်ခဲ့သည့် (၂၅) နှစ်ခန့်က လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းမှာ ပြောကြားခဲ့သည့် " ကြိုးစားကြပါ၊ ကြိုးစားက ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဘုရားကလည်း သာမာန်လူပါပဲ၊ ကြိုးစားရင် ဘုရားတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်" ဆိုတဲ့ စကားကို ဖြတ် ညှပ်ကပ် လုပ်ကာ စစ်အာဏာရှင်တို့က အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကွန်မြူနစ်တံဆိပ်ပင် ကပ်ဖို့ ကြိုးစားသည့် ဆောင်းပါးများ အစိုးရသတင်းစာများမှာ ရေးသားခဲ့ကြလေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘုရားကို သာမာန်လူဟု ပြောသည်တဲ့ အစချီကာ အပုပ်ချ ရေးသားလေသည်။
ယခု NLD ဥက္ကဌ ပြောသည့် ပြည်သူတွေအပေါ်ထားသည့် စေတနာနှင့် ပြည်သူတွေက ဒါလိုချင် ဒါကို လုပ်ကိုလုပ်ရမည်ဆိုသည့် အချက်ကို လမ်းလွဲအောင် ယခင် အာဏာရှင်တို့ လေသံ အသုံးအနှုန်းဖြင့် ဝေဖန်တာတွေ ထွက်လာတာဟု ထင်မြင်မိသည်။ အဓိကက ပြည်သူတွေ တညီတညွတ်ထဲ ရှိကြဖို့ပင်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သည့် အပြောင်းအလဲကို သွားဖို့အတွက် အပြောင်းအလဲကို လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ရမည့်အလုပ်ကို မဝေဝါးပဲ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ အထူးပင်အရေးကြီးလှပေသည်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 9:11 PM No comments:
" ဦးဆောင်သူစေရာ" ၁၇- ၈-၂၀၁၅ ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၄) အမှတ်(၃၁)မှ
၀၁၅ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်လို့ ကြေညာလိုက်တဲ့အခါ စိတ်က ၁၉၉၀ခုနှစ်ဆီ ရောက်သွားသည်။ ထိုစဉ်က အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် (NLD )ကို ပြည်သူတွေ စုပြုံမဲပေးခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းက ဒီမိုကရေစီလိုချင်၍ပဲ ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုက လတ်တလောအစိုးရကို ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အုံးအုံးကြွက်ကြွက် တော်လှန်ထားရာ အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ကပြတ်အောင် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် အရောက်ပိျု့နိုင်မည့် NLD ကို အစွမ်းကုန် ထောက်ခံလိုက်တာဖြစ်သည်။ ယခု ဒုတိယအကြော့ အားပြိုင်ကြရတော့မည်။ အာဏာရှင်နှင့် ဒီမိုကရက်တို့ အားပြိုင်ပွဲမှာ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူပြည်သူတွေက ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပီပီပြင်ပြင် ရောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ပေးမည့် ပါတီကိုသာ မဲပေးကြမှာ အမှန်ပင်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကို ရောက်အောင် ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်မည့် အမှန်တကယ်အပြောင်းအလဲကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည့် ဦးဆောင်နိုင်မည့်သူကိုသာ မဲပေးရွေးကြပေတော့မည်။
ပြည်သူတွေလိုလားသည့် အပြောင်းအလဲကို ဦးဆောင်မည့်သူ မြန်မာပြည်တွင် ရှိနေသည်။ ပြည်သူအားလုံး ညီညွတ်ရေးဖို့နှင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးချယ်ဖို့ပဲလိုပါသည်။ အာဏာရှင်တပိုင်း အစိုးရ တိုင်းပြည်အုပ်ချူပ်နေသမျှ ပြည်သူတွေ လူချင်းတူသူချင်းမျှ နေဖို့ နေနေသာသာ ဒုက္ခအပေါင်းသာ ဝန်းရံနေပေလိမ့်မည်။ ပြည်သူအတွက်ဆိုပါက ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို လက်ပိုက်ကြည့်နေမည့် အစိုးရအောက်မှာ ဆက်လက် ရုန်းကန် နေရပေလိမ့်မည်။
ထိုင်းလူမျိူး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း စကားစမိရာ သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံရေး ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေးကို ကြားသိရသည်။ အနီ အဝါ ကွဲပြားနေသည့် ပြည်သူတွေမှာ အနီဖက်က တက်လာလိုက် အဝါက ဆန္ဒပြလိုက်၊ စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းသွားလိုက်၊ အဝါဖက်က အာဏာရတော့ အနီတွေက ဆန္ဒပြ ဒီလို ပြည်သူတွေ နှစ်ခြမ်းကွဲ တိုင်းပြည်မငြိမ်တော့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက် ဒီလိုသံသရာက ပြည်သူတွေ လွတ်မြောက်ချင်ပါပြီတဲ့။
( အနီ အဝါ အကွဲအပြဲ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုတော့ နောက်အပတ်မှာ အပြည့်အစုံ ရေးပါအုန်းမယ်)
အဲဒီလို လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် စစ်တပ်ဝင်တာမလိုပဲ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ထောက်ခံမယ့် လက်ခံနိုင်မယ့် ဦးဆောင်သူ လိုချင်နေကြတယ်လို့ ဆိုလေသည်။ စာရေးသူက အသစ်ကို လိုချင်တာပေါ့ လိုဆိုရာ အပြည့်အဝ ထောက်ခံသည်။
စာရေးသူနှင့် ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်ထိုင်စောင့်စဉ် ကြုံရသည့် ထိုင်းအမျိူးသမီးကြီးတစ်ယောက်ကို ပြန်ပြောင်းသတိရမိသည်။
ထိုအချိန်က အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်( NLD) ဥက္ကဌ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များသွားရောက်နေချိန်ဖြစ်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ သတင်းတွေ ဆက်တိုက်တွေ့မြင်နေရချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအန်တီကြီးက စာရေးသူကို ဘာလူမျိူးလဲ မေးပြီး မြန်မာလို့သိတာနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ထိုင်နေရာကနေ ကပ်လျက်ခုံကို ပြောင်းပြီး လာထိုင်ကာ စကားတွေ အဆက်မပြတ်ပြောလေသည်။
" မင်းတို့ ခေါင်းဆောင် အောင်ဆန်းစုကြည် သိပ်တော်တယ်၊ မင်းတို့ သိပ်ကံကောင်းတာပဲ၊ သူခေါင်းဆောင်လာရင် မင်းတို့မြန်မာပြည် သိပ်ကို တိုးတက်သွားမယ်၊ မင်းတို့ ဒီမိုကရေစီရတော့မယ် ငါတို့ဝမ်းသာတယ် ပြီးတော့ မင်းတို့ကို ငါတို့ သိပ်အားကျတယ်၊ တို့တိုင်းပြည်မှာ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မရှိဘူးတဲ့ "
သူ့ကို ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့လို့ရပြီလို့ လာခေါ်တဲ့ အတွက် အခု မင်းတို့တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချူပ်နေတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် သမတနာမည်က ဘယ်သူလို့ မေးတာတောင် ပြန်မဖြေလိုက်ရ၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်ပြီး နေမကောင်းလို့ လာပြတာကိုပင် မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်သွားမိသည်။
လတ်တလော ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်း ထွက်လာရာ ဝေဖန်သံတွေ အပစ်တာတွေ သောသောညံလေသည်။ စာရေးသူကတော့ အပစ်တင်နေသည့်လူတွေကို ကြည့်ပြီး ပြုံးမိလေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ထိုသူတွေသည် ပထမတုန်းက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် NLD ကို စာရင်းတင်သွင်းထားသူအချိူ့ကို သဘောမကျဆိုကာ ဝေဖန် ပစ်တင် မကြိုက်ဟု ဆိုကြလေသည်။ ဝေဖန်တယ်လို့ ပြောလိုက်တာက စကားလှအောင် ပြောရခြင်းသာ၊ တကယ်က ပယ်ပယ်နယ်နယ် ငယ်ကျိူး ငယ်နာဖော်ကာ ဆဲကြတာဖြစ်သည်။
ဟော ကိုယ်စားလှယ်စာရင်း ထွက်လာတော့ အဆိုပါ သူတို့ဆဲထားသူများ မပါလာ၍ဆိုကာ NLD ကို ဆဲကြပြန်သည်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် မပါ၍ ပစ်တင်ကြပြန်သည်။ အဆိုပါကျောင်းသားကို သူတို့ပဲ အစောကတည်းက ငယ်ကျိူးငယ်နာတွေ ဖော်ပြီး ရေးနေပြောနေတာပဲ ဖြစ်သည်။ ဖော်လိုက်တာမှ လွန်ခဲ့သည့် (၂၇)နှစ် ၁၉၈၈ ကာလကတည်းက သူလုပ်ပုံကိုင်ပုံ တွေးပုံခေါ်ပုံတွေ ပြန်ပြောင်းပြောကာ ထိုစဉ်ကတည်းက ကြိုက်တာမဟုတ်လို့ ဆိုသေးသည်။ သူတို့ပဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စာရင်းမထွက်ခင်မှာ ရွေးလိုက်မှာဆိုး၍ထင့်၊ ငယ်ကြိုးငယ်နာဖော်လိုက်၊ နောက်ကြော င်းတွေ ရှာပြောလိုက်၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်း ထွက်လာတော့ မရွေးလို့ဆိုကာ NLD ပါတီကို ဆဲလိုက် လုပ်နေကြရာ အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်( NLD) ကို တမင်ကို အပုတ်ချနေတာဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းရလေသည်။
အရေးကြီးသည်က ရွေးကောက်ပွဲမျာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အနိုင်ရရှိရေးမဟုတ်ပါလား၊ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရ တဖြစ်လဲ ဒီမိုကရေစီနာမည်ခံ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကို တော်လှန်ဖို့ လမ်းမလွဲဖို့ လိုလေသည်။ .ခုအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီကို တစ္ဆေသရဲလို ကြောက်ရွံ့သူတွေက သွေးထိုး သွေးခွဲ သပ်လျှိူတာတွေ လုပ်မှာသေချာသည်။ ဒီမိုကရက်တွေ အင်အားလျော့အောင် လုပ်မှာသေချာသည်။ အမျိူးမျိူး ပစ်တင်ဝေဖန်နေသူတွေမှာ သွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ပါလေစလို့ သံသယဝင်မိသည်။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးတာမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတ်မှတ်ထားသည့် ဥပဒေတွေနှင့် အညီ လုပ်ဆောင်ရတာလည်း ရှိနိုင်သည်။ တချိူ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေအရ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဖြစ်ခွင့် မရှိတာတွေ သိရသည်။ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ဥပဒေကိုပါ နားလည်မှ လို့ ပြောတတ်သည့် ရှေးက နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ ရှိသူတွေ ပြောတာ သတိရမိလေသည်။
တောင်ကိုးရီးယားမှာ ၁၉၈၀ခုနှစ် နာမည်ကျော် မေ၁၈ အရေးအခင်းဖြစ်ပြီး အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချဖို့ ကြိုးစားရာ နာမည်ကျော် ဂွမ်ဂျူးလူသတ်ပွဲကြောင့် အာဏာရှင် ချန်ဒူးဝှမ်က ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးမည်ဟု ကြေညာကာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၈၇ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့ စစ်တပ်ကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် ချန်ဒူးဝှမ်နှင့်အတူ အာဏာသိမ်းစဉ်က အတူပါလာသည့် ဗိုလ်ချူပ် နိုတေဝူးက ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရသွားသည်။ အဓိကက မဲတွေ ပျံ့သွားပြီး အတိုက်အခံတွေ အရေးနိမ့်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို အမှတ်ရကာ မြန်မာပြည်သူတွေ သတိထား သုံးသပ်ဆင်ခြင် သင့်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် သွားချင်လျင် ဒီမိုကရက်တွေ အားကောင်းမှဖြစ်မည်။ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံကတော့ ထိုအဖြစ်ကို သင်္ခန်းစာယူကာ နောက်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဒီမိုကရက်တွေ အားကောင်းလာအောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ သဖြင့် ယခုဆိုပါက ဒီမိုကရေစီအစိုးရအုပ်ချူပ်မှုအောက်မှာ တိုးတက်သော တိုင်းပြည်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိနေလေပြီ။ အဓိကက ဒီမိုကရေစီလိုချင်ပါက ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်မည့် ပါတီကို ရွေးချယ်မှ ဖြစ်မည်။
" နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုကြီးက NLD ကို အစိုးရအဖွဲ့တင်မြှောက်လိုက်လို့ တစ်နေ့မှာ ပြည်သူက မလိုလားတော့ဘူးဆိုရင် ကျမတို့ NLD အနေနဲ့ ကပ်ဖဲ့ပီးနေနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး
အသာတကြည်နဲ့ ထွက်သွားပေးမယ်ဆိုတာ ကျမတို့ ပြောရဲပါတယ်
အဲ့လိုမာနမျိုး ကျမတို့မှာ အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတာ ပြောပါရစေ လို့ " ဇူလိူင်လ(၂၆)ရက် မော်ကျွန်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပညာပေးရေးဟောပြောပွဲမှာ ပြောလိုက်တာ နားထောင်ရသည်။ အာဏာကို လက်မလွတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်လိုသည့် စစ်အာဏာရှင်တို့နှင့် အကွာကြီးကွာသည့် ဒီမိုကရက်စိတ်ဓါတ်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ဟန်ပြဒီမိုကရေစီမှ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီသို့ ကူးပြောင်းပေးမည့် ခေါင်းဆောင်လည်း အသင့်ရှိပြီ။ တိုင်းပြည်ကို အကျိူးရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဟု ယုံကြည်ရသည့်အပြင် မကြိုက်ပါက အေးအေးဆေးဆေး ထွက်သွားပါမည်ဆိုသော ဒီမိုကရက်အစိုးရမျိူးပြည်သူတွေ ရရှိအောင် အားလုံး ညီညွတ်စွာ မဲထဲ့ကြရပေမည်။
ဘုရားလောင်းဇာတ်တော်တစ်ခုမှာ ဘုရားလောင်း လှည်းကုန်သည်ဘဝ လှည်းသားငါးရာကို ဦးဆောင်ကာ ခရီးထွက်ရာမှာ လမ်းမှာ ဘီလူးတို့ရဲ့ ဖျားယောင်းခံရသည်။ သို့သော် ဘီလူးတို့၏ လှည့်ကွက် ကျော်လွှားနှိုင်ခဲ့ပြီး လိုရာခရီးရောက်ကာ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လည်း အဆင်ပြေခဲ့သည်။ အခြားလှည်းသား ငါးရာတို့မှာ ဘီလူးတို့လှည့်ကွက်ထဲ ဝင်မိပြီး ရေကန်ထဲရေချိူး ကြာရိုးကြာစွယ်များ စားသောက်၊ လူယောင်ဖန်ဆင်းထားသည့် ဘီလူးမတို့နှင့် ပျော်ပါးကာ အသက်ဆုံးခဲ့ကြရသည်။ ထိုအဖြစ်ကို ယှဉ်ကြည့်သော် အဓိကက ကိုယ်သွားမည့် ခရီးလမ်းမှာ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အမိန့်ကို နာခံခြင်းဆိုတာ တွေ့ရလေသည်။ မကျွမ်းကျင်သည့် အရပ်ဒေသကို ခရီးသွားသူသည် နားလည်တတ်ကျွမ်းသည့် ပညာရှိကို ခေါင်းဆောင်တင်ကာ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာရသည်။ လမ်းပြရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း သွားရသည်။ လမ်းဆုံလမ်းခွရောက်လို့ ဘယ်ဆီလိုက်ရမည် ဇဝေဇဝါဖြစ်တိုင်း လမ်းပြဖြစ်သူ ပြရာလမ်းကို လျှောက်မှ ကိုယ်သွားချင်သည့် လမ်းကို တည့်တည့်မတ်မတ် ရောက်ပေလိမ့်မည်။
ယခုလို ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာသည့်အချိန်မှာ သတိရမိသည့် သူတစ်ယောက်ရှိပါသည်။ သူသာရှိပါက
" ခင်ဗျားတို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ပြီးဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်မဟုတ်လား၊ တိုင်းပြည်ကောင်းတာ တိုးတက်တာ လိုချင်တာမဟုတ်လား
ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောမနေနဲ့ NLD ကိုသာမဲထဲ့၊ ဒါပဲ " လို့ ပြောမှာ သေချာသည်။
" အတူလေးရယ်တဲ့ ယှဉ်ကာပြိုင်" ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၄) အမှတ်(၃၀)မှ
ထိုင်းဝန်ကြီးချူပ်ဟောင်း အဘီဆစ်က လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပြီး နောက်တစ်ရက်မှာပဲ လက်ရှိ ထိုင်းဝန်ကြီးချူပ် ပရာယွတ်က သူ့ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း စနစ်တကျ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများနဲ့ အပြောင်းအလဲ လုပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းလေသည်။ သဘောကတော့ အဘီဆစ်ရဲ့ ဝေဖန်မှုကို လက်ခံပြီး ပြုပြင်စရာရှိတာ ပြုပြင်မယ်လို့ ဆိုလိုက်တာဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက် ဒီမိုကရေစီဆန်လိုက်ပါသလဲ၊ တကယ်တော့ ယနေ့အချိန် ထိုင်းနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကို အကြောင်းပြပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်း အုပ်ချူပ်နေသည့် ကာလဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုပါက အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်အောင် ဝေဖန်သည်ဆိုကာ ပုဒ်ထီး ပုဒ်မတွေ တပ်လာနိုင်သည်။
ထိုင်းစီးပွားရေး ကျဆင်းလာတယ်ဆိုတာ အစိုးရလို တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေလို စစ်တမ်းမကောက်၊ ဒေတာ တွက်ချက်ခြင်း မရှိပဲ သာမာန်လူတစ်ယောက်အနေနှင့်ပင် သိရှိလာရလေသည်။ ဈေးသည်တွေ ၊ ဈေးဆိုင်တွေ လမ်းတွေပေါ်မှာ တိုးလာသည်။ တခါမှ မတွေ့ဘူးသည့် တောင်းရမ်းသူတွေ များလာသည်။ လူသွားလူလာနည်းပါး၍ လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ် ဝန်းကျင်ခန့်အထိ မည်သည့် ဆိုင်မှ မရှိပဲ ရှင်းလင်းနေသည့် ဟိုင်းဝေးလမ်းမသို့ အထွက်လမ်းတွေမှာ ဈေးဆိုင်လေးတွေ အလျှိူ အလျှိူ ပေါ်လာသည်။ ဒီအကြောင်း ရေးသာရေးရတာ မြန်မာအစိုးရက တွေ့လား သူများနိုင်ငံတွေလည်း စီးပွားရေးတွေကျနေတာလို့ ပခုံးချင်းယှဉ်ပြောမှာလည်း စိုးရသေးသည်။
မြန်မာပြည်မှာ ရေကြီးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ စဖြစ်ကာစက ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ သတင်းတွေ ပလူပျံနေပြီး အစိုးရက အတိအကျ ပြောတာ မတွေ့တဲ့အတွက် အစိုးရပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းကို စောင့်နားထောင်ရာ ရေကြီးသည့်သတင်းနှင့်အတူ တိုင်းဝန်ကြီးချူပ်က အလှုပစ္စည်းတွေ ပေးတဲ့ သတင်းတွေ ဝေဝေဆာဆာ တွေ့ရသည်။ ရေထဲမှာ ပြေးလွှား ရွှေ့ပြောင်းနေသည့် မြင်ကွင်းတွေတော့ မမြင်ရ။ မဏ္ဍပ်တွေမှာ အစိုးရအဖွဲ့က တွေ့ဆုံ အားပေးစကားပြောတာတွေ မြင်ရသည်။ တဆက်ထဲမှာ မြန်မာပြည် ရေကြီးသတင်းပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ သတင်းစပြရာမှ ရေကြီးနေသည့် အနောက်နိုင်ငံ သတင်းကိုတန်းပြလေသည်။ စိတ်ထဲမှာ အစိုးရက ရေကြီးတာ တို့တစ်နိုင်ငံထဲ မဟုတ်ဘူးဟေ့လို့ ပြောချင်တာလား မသိလို့ တွေးလိုက်မိလေသည်။
နောက်တော့ ဒါဟာ တကယ်ဖြစ်နေသည်။ သမတက သူများနိုင်ငံတွေလည်း ဖြစ်နေတာပဲ လို့ ထုတ်ဖော်ပြောသည်။
မြန်မာပြည်မှာ ငွေတန်ဘိုးကျဆင်းပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်လာသည်။ ဒေါ်လာငွေနှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်းမှာ တခါမှ မရောက်ဖူးသည့် ဈေးကို ရောက်ရှိသွားသည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဒေါ်လာကို မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်ထောင့်သုံးရာနား ရောက်လုရောက်ခင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုင်းမှာလည်း ၂၀၁၁ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အဆိုးဝါးဆုံး ငွေတန်ဘိုးကျဆင်းတာဖြစ်သည်လို့ ဆိုသည်။ အမေရိကန်ငွေ တစ်ဒေါ်လာကို ထိုင်းဘတ်(၃၅) ဘတ်အထိ ရောက်သွားသည်။ ယခင်က ဒေါ်လာ(၁၀၀)ငွေလဲလျင် ထိုင်းဘတ် သုံးထောင်ဝန်းကျင်ကနေ သုံးထောင့်နှစ်ရာ အလွန်ဆုံး ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များက အမေရိကန်ငွေကြေး ကျဆင်းမှုကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကို ပြန်လည်နလံထူအောင် ယခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ငွေကြေးခိုင်မာလာတာလို့ ဆိုလေသည်။ တဖက်က နိုင်ငံတကာသုံး ငွေကြေးက ဈေးကွက်မှာ ခိုင်မာလာသည့်အခိုက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာက မလုပ်တတ်မကိုင်တတ် အလွဲအချော်တွေကြောင့် ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက် ဆိုသကဲ့သို့ ဖြစ်ကာ အများတကာထက် နှစ်ထပ်ကွမ်းနစ်နာကြရလေသည်။
တိုင်းပြည်မှာ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်သည့် ပညာရှင်များ ဦးဆောင်လုပ်ပါမှ ပြည်သူတွေ အထိအခိုက်နည်းမှာတော့ အမှန်ပင်။
မြန်မာပြည်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တရိပ်ရိပ်နေသည့်အချိန်မှာပဲ နိုင်ငံအဝှမ်း ရေလွှမ်းရာ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာမှာ စိုးရိမ်သည်ဆိုသည့် သတင်းတွေ ဖတ်ရသည်။ (၂၀၁၁)ခုနှစ် မှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ခရိုင်(၇၇)ခု ရှိတာမှာ (၆၇) ခရိုင် ရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံ ရေလွှမ်းခံခဲ့ရလေသည်။ ထိုစဉ်က ဝန်ကြီးချူပ်မှာ ယင်လတ်ရှနာဝပ်ဖြစ်သည်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ မတက်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်သည့်ကြားကပင် ဆီဈေးတွေ ခေါက်ချိူး တက်သွားသည်။ သူကတော့ တိုင်းပြည်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင် ပြောပြသည်။ ဆီထွက်သီးနှံများ ရေနစ်မြုတ်သည့်အထဲ ပါသွားသည်။ ကြံစိုက်ခင်းတွေ ရေမြုတ်၍ သကြားဈေး အနည်းငယ်တက်သည်။ သို့သော် ဆန်ဈေးအထွေအထူးပြောပလောက်အောင်မတက်ပါ။ မတက်အောင် ကြိုးစားထားရာ တဖက်က ခံသာလေသည်။ ယခု ၂၀၁၅ခုနှစ်ရောက်သည်အထိ ဆန်ဈေးက ပုံမှန်ပင်။ အဓိကက ဝိသမလောဘသမားတွေက အခွင့်အရေးချောင်းကာ အလုအယက် ဈေးတက်တာမျိူး မရှိပေ။
ထိုင်းမှာ ခေါက်ဆွဲခြောက် တစ်ထုတ်ကို ငါးဘတ်မှ ခြောက်ဘတ်သို့ အကြောင်းမဲ့ ဈေးတက်သည့်အတွက် ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြရာ ငါးဘတ်သို့ ပြန်ချပေးရသည့် အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်။ ရေဘေးခံရ၍ ဆီထွက်သီးနှံများ နစ်မြုတ် သဖြင့် ပဲ ဆီ (၁၀၀၀ မီလီဂရမ်) ၊ မြန်မာအလေးချိန် ခြောက်ဆယ်ကျပ်သားခန့် တစ်ပုလင်းကို (၂၄) ဘတ်ကနေ (၄၈)ဘတ် တက်သွားရာ အများက လက်ခံလေသည်။ ယခု ၂၀၁၅ခုနှစ် အရောက်မှာ ဆီတစ်ပုလင်း (၅၅)ဘတ်အထိ ဈေးတက်လာလေသည်။
ထိုင်းစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ သိသိသာသာ တက်လာသည်။ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ စုံ့သမ်လို့ ခေါ်သည့် ထိုင်းသင်္ဘောသီးထောင်း တစ်ပွဲကို ဘတ်(၃၀)ကနေ (၃၅)ဘတ်၊ ထိုင်းတွေ အများဆုံးစားကြသည့် ထမင်းပေါ်မှာ ဟင်းတခါထဲ ပုံသည့် စတိုင်၊ အရင်က တစ်ပွဲ (၃၀) ကနေ ယခု (၃၅)ဘတ်၊ တချိူ့ဆိုင်တွေမှာ ဘတ်(၄၀)၊ ကွေ့တီယိုလို့ ခေါ်သည့် ထိုင်းခေါက်ဆွဲပြုတ်လည်း ထို့အတူ ဈေးတွေ တက်လာသည်။
ထူးခြားသည်က ရွှေဈေး ဘတ်(၁၈၀၀၀) အထိ ကျဆင်းနေသောလည်း ယခင် ဘတ်နှစ်သောင်းခွဲ ဈေးပေါက်တုန်းကလို ဝယ်သူကြိတ်ကြိတ်တိုးမနေ။
ထိုင်းစစ်တပ်က မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသည့် တရားမဝင် ငါးဖမ်းလှေတွေကို ဖမ်းဆီးရာက ရေထွက်ကုန်တွေ ဈေးတက်ကုန်ပြန်သည်။ မီဒီယာက ချက်ခြင်း သတင်းထုတ်သည်။ ပင်လယ်မထွက်ပဲ ရပ်နားထားရသည့် လှေများ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိတော့သည့် ငါးဖမ်းလုပ်သားများ၊ ဈေးထဲမှာ ရေထွက်ပစ္စည်းပြတ်လတ်မှုနှင့်အတူ ဈေးတွေ တက်တာ စသဖြင့် ရိုက်ကူး သတင်းထုတ်ကြသည်။ ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်မှာ ကြိုမတွေးဘူးလား၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မရှိပဲ ရုတ်တရက် အမိန့်ထုတ်တာကို ဝေဖန်သံတွေ သောသောညံသွားရာ အစိုးရက ပြန်လည်စီမံ ပေးလိုက်ရလေသည်။
တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချူပ်တာမှာ လူမှန်နေရာမှန် အုပ်ချူပ်မှသာ သင့်တော်နိုင်သည့် အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သည်။ ထိုင်းစစ်တပ် အာဏာသိမ်းစဉ်ကာလက တိုင်းပြည်ကို ထိုကဲ့သို့ အုပ်ချူပ်နေပါက မြန်မာပြည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားမည်ဟု ပညာရှင်တွေ ဝေဖန်ရေးသားတာ ဖတ်ရတာ ပြန်သတိရမိလေသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ သူ့နေရာနှင့်သူ လူမှန်နေရာမှန်သာ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပေမည်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 9:06 PM No comments:
" သတင်းစကားပါးပါရစေ "( ဩဂုတ်လ(၃)ရက် ၂၀၁၅ခုနှစ် ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၄) အမှတ်(၂၉)မှ)
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဆရာဦးထွန်းလွင်က လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ ရေကြီး ရေလျှံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာတစ်ခုနဲ့ အင်တာဗျူး မှာအခုလို ပြောတာဖြစ်သည်။ ကန့်ဘလူ၊ ကောလင်း အပါအဝင် စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ ရွာတွေ၊ လယ်မြေတွေ ရေနစ်မြုတ်ကုန်ပြီ၊ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း ရေကြီးမှုသတင်းတွေ ဆက်တိုက် ဆိုသလို တွေ့နေရလေသည်။ သို့သော် ရေကြီးတာ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာပဲ ကြီးနေသလား ထင်ရအောင် အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေ နှေးကွေးနေတာ တွေ့ရသည်။ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းမှာတော့ ရေကြီးရေလျှံ သတင်း၊ ရေကြီးလာနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်၊ ရေအနေအထား စတာတွေထက် ရေကျသွားပါက မည်သို့မည်ပုံ နေထိုင်ရမည်၊ ကျန်းမာရေးသတိပေးနှိုးဆော်ချက်တွေကို နားထောင်ရသည်။ ဟိုမှာ ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေက မီးကမလာ ရေကစိုရွဲ စားဖို့က တမျိူးဒုက္ခမျိူးစုံထဲမှာ ရုပ်မြင်သံကြားကို ဘယ်နေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါ့မလဲ။
ရေဘေး ကူညီနေသည့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း အချိူ့ နှင့် ပရဟိတအဖွဲ့များပင် လိုအပ်သည်များ သယ်ဆောင်၍ သွားပါသော်လည်း အမှန်တကယ် လိုအပ်သည်များကို ထိုဒေသရောက်မှ သိရှိ၍ နောက်လူတွေ လာပါက ယူဆောင်လာရန်တွေကို လူမှုကွန်ရက်တွေမှ ရေးသား ဖြန့်ဝေသတိပေး အကြောင်းကြား လက်ဆင့်ကမ်း သတင်းဆိုနေကြရလေသည်။ အတွေ့အကြုံရှိသည့် NGO ဝန်ထမ်း တစ်ဦးကတော့ ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပထမဦးဆုံး အရေးကြီးတာက ရေသန့် ရရှိရေးပါတဲ့၊ ပြီးတော့ဆေးဝါး၊ အဝတ်အထည်ပါတဲ့၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ်တွေထက် ရေသန့်နှင့် ဆေးဝါး ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ ဦးစားပေးရမည်ဟု ဆိုပါသည်။
သဘာဝဘေးဒဏ်မှာ မလွဲမရှောင်သာ၍ ခံကြရတယ်ဆိုသော်လည်း ကြိုတင် သတိပေးချက်က အလွန်ပင် အရေးကြီးပါသည်။ ကြားရသည်များကတော့ ဒေသခံတွေသည် ရေကြီးလာမှ ကသုတ်ကရက် ပြေးကြရသည်တဲ့၊ တချိူ့ရွာတွေဆိုပါက ဆည်ရေကြောင့် နစ်မြုတ်ကုန်လေသည်။ တိုးတက်လာသော ခေတ်စနစ်ကြောင့် ယခုခေတ်မှာ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပြည်သူတွေ သိကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ကတော့ မပြောမဆို ဆည်ရေဖောက်ချလိုက် သဖြင့် တစ်ညအတွင်းမှာ ရွာလုံးကျွတ်ပျောက်သွားရတာ မည်သူမျှပင် မသိလိုက်၊ ဆွေမျိူးသားချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ဆင့်ကမ်းရင်းမှ သိရတာပင်၊ သတိပေးချက်ထုတ်တာလည်းမရှိ၊ လုပ်ချင်တာ လုပ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ ဆည်ရေ ပြည့်လာ၍ ဖောက်ချဖို့ လိုအပ်သည် ဆိုပါက နီးစပ်ရာ ဒေသခံများကို ကြိုတင် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ရပေမည်။ ရေအတိုင်းအတာကို တွက်ချက် ချိန်ဆ၍ တစ်နေ့ ဘယ်နှစ်လက်မ ဖောက်ချမလဲဆိုတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရသည်။ အဆိုပါ ဖောက်ချသောရေသည် ကျေးရွာ၊ လယ်မြေတွေ အပေါ် ထိခိုက်မှု မရှိအောင် တဖြေးဖြေး ချင်း တနေကုန် ၊ ရက်ဆက် ဖောက်ချရခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အကြောင်းတွေကို စာရေးသူ သိရသည်မှာ ဆည်မြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်၍လည်း မဟုတ်ပါ၊ အဆိုပါ ဌာနတွေမှာ အလုပ်လုပ်ဖူး၍လား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါ။ အစိုးရက ပညာပေး၍ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနှင့် သိရှိလာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာပြည်မှာတော့ မဟုတ်ပါချေ။
စာရေးသူသည် မြန်မာလူမျိူးတစ်ယောက် ဖြစ်သော်လည်း တိုင်းပြည်၏ ခေတ်စနစ်ကြောင့် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အရိပ်ကို ခေတ္တခိုကာ ထိုင်းအစိုးရကို ပေးစရာရှိသည့် အခွန် ထမ်း၍ နေတာသာရှိပြီး သူတို့လက်အောက်မှာ ၊ သူတို့မျက်နှာကြည့်ပြီး လုပ်ရသည့် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေခြင်း မရှိပါ။ သို့သော် ထိုင်းအစိုးရ၏ ပြည်သူတွေ အပေါ်ထားသည့် စေတနာနှင့် အခွင့်အရေး အချိူ့ ကို ကပ်သပ်ပြီး ရနေတတ်လေသည်။
သဘာဝဘေးဒဏ် ကျရောက်နိုင်သည့် အလားအလာများ ဖြစ်လာပါက တာဝန်ရှိသူများက တစ်လမှနေ အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်ခန့် ကြိုတင် သတိပေးသည့် အကျင့်ရှိလေသည်။ မိုးကြီးမည်၊ ရေလျှံမည်၊ မိုးခေါင်မည်၊ ရေရှားမည် စသဖြင့် ကြိုတင် အသိပေးသည့် အလေ့အကျင့် ရှိလေသည်။ ထို့အပြင် ရေကြီး၊ ရေရှား ဖြစ်က မည်သို့ ဆောင်ရွက်မည်ကိုလည်း ကြိုတင်စီမံထားပြီး ဖြစ်သည်မှာ အားကျစရာပင်၊
၂၀၁၅ခုနှစ် ဇူလိုင်လဆန်းအထိ ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့မှာ မိုးရွာသွန်းခြင်း မရှိပဲ ပူပြင်းခြောက်သွေ့လျက်ရှိလေသည်။ မိုးလေဝသနှင့် ရာသီဥုတု တိုင်းတာရေးအဖွဲ့က မိုးခေါင်မည်ဟု သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လာသည်။ အစိုးရက မိုးခေါင်ပါက ရေရှားလာမည်ဖြစ်၍ ရေကို ချွေတာသုံးဖို့ ပြောလေသည်။ ဝန်ကြီးချူပ် ပရာယွတ်ကိုယ်တိုင်က အဝတ်တွေကို နည်းနည်းချင်းမလျှော်ပဲ စုလျှော်ဖို့၊ သွားတိုက်နေစဉ် ရေပိုက်ခေါင်းတွေ ပိတ်ထားဖို့၊ သစ်ပင်တွေကို နေ့စဉ် ရေလောင်းခြင်း မလုပ်ပဲ တစ်ရက်ခြားတခါမှ ရေလောင်းဖို့ ပြောကြားလေသည်။
စာရေးသူမှာ အဝတ်လျှော်မည် ပြင်တိုင်း၊ အပင်တွေ ရေလောင်းဖို့ ပြင်တိုင်း ပရာယွတ်မျက်နှာ မြင်ယောင်ကာ ရေသုံးဖို့ တွန့်သွားလေသည်။ အိမ်နီးချင်း မိတ်ဆွေကလည်း ထိုသို့ ခံစားရကြောင်း ပြောလာပြန်တော့ အားလုံး တွန့်သွားပြီး ချွေတာရေးစကား ထိရောက်သည်ဟု ဆိုရမည်။
ယခုသော် မိုးကြီး၍ ရေများလာပြန်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ရေကြီးနိုင်ပြီး မြေပြိုမှု ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကြိုတင် သတိပေးပြန်လေသည်။ သဘာဝဘေးဆိုတာ ဒီလိုပဲ ပြောင်းလည်း ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောမို့ အစိုးမရ။ ပထမဆုံး ရေကြီးတာ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့တာ ၂၀၁၁ခုနှစ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖြစ်သည်။ ၊ မြန်မာပြည်မှာ နေစဉ်က ရေကြီးတာ တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ အတွက် ရေကြီးပါက ရေတွေဝုန်းကနည်း တက်လာပြီး အသက်လု ပြေးရမည်ဟု စိုးရိမ်နေခဲ့လေသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုနှင့် သတင်းစာတို့မှ မိုးများ၍ ရေကြီးမည့်အကြောင်း၊ ဆည်များ ရေပြည့်လာ၍ ရေဖောက်ချမည့် အကြောင်း သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်လေသည်။ ရေကြီးတော့မည် ဆိုတော့ ရေဘယ်လို ကြီးပါလိမ့် စောင့်ပြီး ညည ထကြည့်ရလေသည်။ မြစ်ရှိရာ သို့ သွား၍ ရေမှတ်ကို သွားကြည့်ကြသည်။ လာကြည့်သူများမှာမနည်းမနော၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်တွေဖြင့်လာကြည့်ကြရာ ဈေးသည်တွေ ပွဲဈေးလို စည်ကားစွာ ရောင်းကြရာ မြစ်ဘေးမှာ ဈေးတန်းကြီး ဖြစ်နေလေသည်။ မြစ်ထဲမှာ စီးနေသည့် ရေအရှိန်ကို ကြည့်လိုက် ဒီဂျစ်တယ်ဖြင့် အချက်ပြနေသည့် ရေမှတ်ကို ကြည့်လိုက်ဖြင့် တွက်ချက်၍ ရလေသည်။
မြစ်ထဲမှာ ဆည်ကဖောက်ချလိုက်တဲ့ ရေတဖြည်းဖြည်း များလာတဲ့အခါ မြို့ထဲ၊ ရွာထဲ ရေဝင်ဖို့ သေချာလာပြိဆိုတော့ ရပ်ကွက်တွေမှာ တပ်ထားသည့် လော်စပီကာမှနေ၍ သတိပေးကြေညာချက်တွေ ဆက်တိုက် ထွက်လာလေသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ချင်းမိုင်ရေကြီးတော့မှ ရေတက်တာ ဝုန်းကနည်း တက်တာမဟုတ်ပဲ တဖြေးဖြေး တက်လာတယ်ဆိုတာ သိရလေသည်။ ပြေးလို့မှ လွတ်ပါ့မလား တွေးပူရတာ အလကားဖြစ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အိမ်ကနေ ရေလွတ်ရာ နှစ်ထပ်တိုက် စာသင်ကျောင်းကို ပြောင်းရွှေ့နေရလေသည်။ လှုတန်းသည်များက ရေသန့်နှင့် ဆေးတွေ ဖြစ်သည်။ အရက်ပြန်နှင့် ထိခိုက်ရှနာလိမ်းဖို့ ဆေး၊ဂွမ်း၊ ပလာစတာတွေလည်းမနည်းမနော၊ ရေကျပြီးအိမ်ပြန်တဲ့အထိ ဆက်သုံးနေရလေသည်။ ရေတက်လာတော့ ရေက လူကြီးရင်ခေါင်းလောက်အထိ တက်သည်။ သို့သော် လူတွေ ၊ ပစ္စည်းတွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု အနည်းဆုံးအနေအထားဖြင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ကို ခံရတာဖြစ်သည်။
ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်စဉ်ကို ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ပြီး ပညာပေး၊ သတိပေးချက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရပြီး ၊ ရေက သူ့ဖာသာ တက်ချင်သလောက်တက်၊ အမိုးအကာအောက်မှာ နွေးနွေးထွေးထွေးဖြင့် နေခဲ့ရတာ ကြုံခဲ့သည့်အတွက် ယခုလို မြန်မာပြည်မှာ အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုဖြင့် ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းနေသည့် အဖွားအိုကို မြင်ရသည့်အခါ၊ ရေရွှဲနစ်နေသည့် စာအုပ်ကလေးကို ကြည့်ပြီး ဝမ်းပမ်းတနည်း ငိုနေသည့် ကလေးငယ်လေးကို မြင်လိုက်ရသောအခါ ဆို့နစ်စွာ ခံစားရပါသည်။
ဆရာဦးထွန်းလွင်ရဲ့ ခန့်မှန်း သတိပေးချက်ဖြစ်လေသည်။
လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးကတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ " လေယာဉ်ပေါ်ကကြည့်လိုက်တော့ မှ မြစ်သာမြစ်က ပင်လယ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ် ။
အပေါ်ကမြစ်တွေဒီလောက်ဆိုးနေရင် ဧရာဝတီ တိုင်းကလူတွေ ပြေးကြရင်အချိန်မှီပါသေးတယ် ။ ပြေးကြဘို့အချိန်တန်ပြီ " တဲ့
သတိပေးစကား ပြောပုံကတော့ သင်းပါပေ့ဆိုတော့ အနားမှာရှိတဲ့ အိမ်သားက ပြောလို့ တော်သေး မှတ်ပါအေ တဲ့၊
သေချာတာကတော့ ရေကြီးရေလျှံမှုသည် မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းမှ ဧရာဝတီတကြော စီးဆင်းလာနိုင်လေသည်။ ပညာရှင်ဖြစ်သည့် ဆရာဦးထွန်းလွင်ရဲ့ ခန့်မှန်း သတိပေးချက်ကို ပြည်သူအများ သိရှိပြီး လိုက်နာနိုင်ကြပါစေ၊ ကျေးလက် တောရွာအရောက် သတင်းစကားတွေ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါစေ၊ ဆုတောင်းစကားနှင့်အတူ ပြည်သူတွေ ဘေးကင်းနိုင်ပါရန် သတင်းစကား မျှဝေလိုက်ရပါသည်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 12:05 AM No comments:
စနေဈေးမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်း( ၂၇ရက် ဇူလိူင် ၂၀၁၅ ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၄) အမှတ်(၂၈) မှ)
ထိုင်းနိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ လာရောက် လည်ပတ်ကြတာ များသည်။ ယခု နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ အခြား အာရှ ၊ ဥရောပနိုင်ငံသားများထက် တရုတ်နိုင်ငံသား ခရီးသွားများ ပိုပြီး လာရောက် လည်ပတ်တာကိုလည်း တွေ့မြင်ရလေသည်။ ဧည့်သည်တွေများလာသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေများစွာရ၇ျိနေသည်။ အစိုးရတင်မက ပြည်သူတွေပါ ဝင်ငွေတိုးကြသည်။ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများသာမက ကားသမားများ၊ ဈေးသည်များ၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများ လက်မလည်အောင် ရှိကြသည်။ တစ်နှစ်ကို ပျမ်းမျှ ဧည့်သည် (၂၅)သန်း လာလည်ရာ ထိုင်းGDP ရဲ့ (၉) ရာခိုင်နှုန်းကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ရရှိတာဖြစ်သည်။ အားကျကျေနပ်ဖွယ်ရာ အထူးကောင်းလှပေသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ လာရောက်လည်ပတ်နိုင်အောင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များကို ကြည့်ချင် လည်ပတ်ချင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်မွမ်းမံထားကြလေသည်။ အတုယူဖွယ်ကောင်းသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မပျက်ဆီးစေပဲ မူလရှိရင်းစွဲကို ခေတ်နဲ့အညီ ပြင်ဆင်ထားတာမျိူး၊ ရှေးခေတ်လက်ရာကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကမ္ဘာခရီးသွားများထံမှ ဝင်ကြေးကောက်ခံကာ ပြုပြင်မွမ်းမံ ထိမ်းသိမ်းထားတာတွေမှာ စာရေးသူတို့ တိုင်းပြည်နှင့် များစွာ ကွာခြားလှသည်။
အဆောက်အဦအသစ်များ ဆောက်လုပ်ရာတွင် အပင်ကြီးများရှိပါက ထိုအပင်ကို ကွင်းချန်ကာ ထိုသစ်ပင်ကို အလှဆင် စာတန်းထိုး၍ပင် ပြသထားလေသည်။ ကျောက်တုံး ကျောက်ဆောင်များလည်း ထို့အတူပင် တွန်းရွှေ့ ချေဖျက်ခြင်းမပြုပဲ ထိုကျောက်တုံးတွေကို အဆောက်အဦရှိရာ ခြံဝင်းထဲမှာ ထဲ့သွင်းထားကြရာ သဘာဝအတိုင်း အလှမပျက် တမျိူးတဘာသာ အသွင်ဆန်းလျက်ရှိလေသည်။
ထို့အတူ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား တဆင့်စကားဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေသည့် လမ်းမပေါ်က ဈေးများကလည်း အထူးပင် ထင်ရှားပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြို့တော်လည်းဖြစ်၊ ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းထားရာ မြို့တော်လည်း ဖြစ်သည့် ချင်းမိုင်မြို့မှာ အဆိုပါ လမ်းပေါ်လျှောက်ရသည့် ဈေးတွေ ရှိပါသည်။ ရိုးရာချည်ထည်များ၊ လက်မှုပစ္စည်းများ၊ အလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ အမှတ်တရ လက်ဆောင်အဖြစ် ဝယ်ချင်စရာ အသုံးအဆောင်များ ရောင်းချသည့်အပြင် ရိုးရာအစားအစာများမှာလည်း စားချင့်စဖွယ် သန့်ရှင်းသပ်ယပ်စွာ ရောင်းချကြရာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ သဘောကျရာ နေရာဖြစ်လေသည်။ စနေနေ့မှာ ရောင်းသည့်ဈေးကို စနေဈေး( Saturday Market walking street) တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ရောင်းသည့် ဈေးကို တနင်္ဂနွေဈေး( Sunday Market walking street) စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်လူသိများလေသည်။ စနေဈေးက ချင်းမိုင်ဂိတ်၊ ထိုင်းအခေါ် ပသို့ချင်းမိုင် နေရာမှာ ရှိပြီး၊ တနင်္ဂနွေဈေးကတော့ ထာ့ပယ်ဂိတ်မှာ ရှိလေသည်။ နေရာတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ရှေးခေတ် ဘုရင်တွေလက်ထက်က မြို့ရိုးဟောင်းနှင့် တံခါးဂိတ်တွေကို တွေ့နေရသည်။ ထိုဂိတ်ဟောင်းတွေ နေရာမှာ လမ်းလျှောက်ဈေးဝယ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုဈေးတွေမှာ လှည့်ပတ်လမ်းလျှောက်နေကြသော ခရီးသွားများမှာ ကြက်ပျံမက စည်ကားသည့် မြန်မာပြည်မှ ဘုရားပွဲဈေးကဲ့သို့ပင်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နီးနီးကပ်ကပ်ဖြင့် ရွေ့တယ်ဆိုယုံ ရွေ့ကာ လျှောက်ကြရသည်။ ရောင်းချ ခင်းကျင်းထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ စားစရာများကို ငေးမောရင်း လျှောက်မှန်းမသိ လျှောက်ကြရသည်။ ဈေးတန်းကြီးက မဆုံးနိုင် တမေ့တမော၊ စာရေးသူတော့ ထိုဈေးတွေမှာ တခါမှ ဆုံးအောင် မလျှောက်ဖြစ်၊ (၂)နာရီခန့် လျှောက်ပြီး ညောင်းညာသည်နှင့် ပြန်လှည့် ဖြစ်တာပင်၊
သို့သော် ထိုဈေးတွေ လျှောက်ရင်း မြန်မာပြည်ကို လွမ်းသည့်စိတ်နှင့် ဘာမှန်းမသိသည့် ရောထွေးနေသည့် ခံစားချက်တွေ အမြဲဖြစ်ရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ရောင်းချနေသည့် လက်မှုထွက်ကုန်လေးတွေမှာ မြန်မာပြည်မှာလည်း များစွာရှိလေသည်။ ကျောက်စိမ်းအကာလေးတွေ၊ ကျောက်နီလေးတွေ၊ ကျောက်ဖြုံးလေးတွေနှင့် ဆွဲကြိုး၊ လက်ကောက်၊ လက်စွပ် စသဖြင့် အလှဆင် လုပ်ဆောင်ထားရာ ထိုပစ္စည်းလေးတွေသည် အမိမြန်မာပြည်မှာ မျိူးစုံအောင်ရှိလေသည်။ လွယ်အိတ်လေးတွေ၊ ချည်သားဘောင်းဘီတွေ၊ ရှမ်းပြည်မှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ ဝတ်ဆင်ကြသည့် ရိုးရာအက်ျီ၊ ဘောင်းဘီလို အထည်တွေ တွေ့ရသည်။ နိုင်ငံခြားသားများ အထူးနှစ်သက်ကြကာ အချိူ့ဆိုပါက ဘောင်းဘီတွေကို ချက်ချင်းဝယ်ပြီး ဝတ်သွားကြတေလသည်။ တန်ဖိုးလည်း မကြီးသည့်အတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဝယ်ကြသလို အမှတ်တရ သိမ်းထားဖို့လည်း ဝယ်ကြလေသည်။ အုန်းမှုတ်ခွက်ကိုပင် အလှဆင်ကာ လက်ကိုင်ရိုးတပ်၍ ရေခွက်အဖြစ် ရောင်းရာ ဝယ်သူများလည်း မရှားလှ။ စာရေးသူငယ်စဉ်က ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အလည်သွားကြသည့် မြေလတ်မြို့ကလေးက အမေကြီးတို့အိမ်မှာ အုန်းမှုတ်ခွက်နှင့် သဲအိုးထဲကရေကို ခပ်သောက်တာ သတိရမိလေသည်။ တဆက်ထဲ မြန်မာပြည်က အုန်းမှုတ်ခွက်တွေကို စိတ်ကူးထဲမှာ ရောင်းကြည့်နေမိလေသည်။
လွန်ခဲ့သည့် တပတ်က မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရောက်လာ၍ အဆိုပါ စနေဈေးကို လိုက်ပို့ရင်း Saturday Walk ကြလေသည်။ ထိုသူငယ်ချင်းက တနေရာ ရောက်၍ ရောင်းနေသည့် ပစ္စည်းကို ကြည့်လိုက် ၊ အလုအယက်ဝယ်နေကြသည့် နိုင်ငံခြားသားများကို ကြည့်လိုက် တောက်ခေါက်လိုက် လုပ်နေရာ စာရေးသူမှာ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ရယ်မောနေရသည်။
" တောက် ကြည့်ပါအုန်း အဲဒါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး၊ တို့ဆီမှာလည်း ရှိတယ်လေ၊ အလကားပေးတောင် မယူကြဘူး" လို့ ဆိုတာကတမျိူး၊
" ကြည့်ပါအုန်း အဲဒါ ယွန်းထည်ကို တုထားတာ၊ ယွန်းအစစ်မဟုတ်ဘူး၊ သစ်သားပေါ်မှာ ဆေးချယ် အရုပ်ချယ်ထားတာ၊ တို့ဆီမှာ အများကြီးပေါ့"
သစ်သားပေါ်မှာ အရုပ်လှလှလေးတွေ ရေးချယ်ကာ လက်ကောက်ကလေးတွေ လုပ်ထားသည့် သစ်သားလက်ကောက်ဆိုင်မှာ တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနေကြသည့် သူများကို ကြည့်ပြီး သူ့မှာ အားမလိုအားမရ၊ တို့ဆီမှာ ဒီလိုဈေးတွေ ရှိရင် ပြည်သူတွေ ရောင်းပန်းဝယ်ပန်း ကောင်းပြီး စီးပွားရေးမြင့်လာကြမှာပဲ၊ အားမလိုအားမရ ပြောပြန်သည်။ ပလတ်စတစ်အလုံးလေးတွေကို ပိတ်စလှလှဖြင့် ကျစ်ညပီး သီကာ ဆွဲကြိုးလေးတွေ ၊ လက်ကောက်တွေ ရောင်းတာ တွေ့ပြန်တော့ " အိုး........... ဘာမှမဟုတ်တာကနေ လှလှပပလေး လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရအောင် ရှာတတ်ကြတယ်နော်လို့ ပြောပြန်သည်။ တို့ဆီမှာ ဒီလို ဧည့်သည်တွေလည်းများ၊ နေရာအကွက်အကွင်းကို အစိုးရက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ပေး ခွင့်ပြုပေးရင် ရောင်းစရာ အလှအပ လက်မှုအထည်တွေ အများကြီးပဲ၊ တို့ပြည်သူတွေ ဝင်ငွေကောင်းမှာလို့ မနားတမ်းပြောသည်။
အဆိုပါ လမ်းတွေသည် အခြားနေ့ နှင့် အခြားအချိန်ဆိုပါက အများသူငါ ဖြတ်သန်းသွားနေကျ ကားလမ်းမပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဈေးနေ့ရှိပါက အခြားလမ်းက လိုလိုချင်ချင်ပင် သွားကြကြောင်းနှင့် အဆိုပါ လမ်းလျှောက်ဈေးတွေကနေ သူတို့ပြည်သူတွေ ဝင်ငွေရတာကို သိရှိကြကြောင်း ပြောပြမိသည်။
နေ့လည်ခင်း မွန်းလွဲပိုင်းကစလို့ ဈေးခင်းကြပြီး တစ်ညလုံးနီးပါး ရောင်းကြရာ နောက်တစ်နေ့ မနက်ရောက်သော် ညက ဒီနေရာမှာ ဈေးကြီးတစ်ဈေး ရှိခဲ့ပါတယ် ပြောလို့ မယုံနိုင်စရာ။ အမှိုက်တမျှင်မှ မရှိ။ အားလုံးသန့်ရှင်းနေလေသည်။ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ လူတွေ ပုံမှန်ပင် သွားလာကြသည့် စနစ်တကျ အမှိုက်စွန့်ပစ်ကြပုံကိုပါ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြမိလေသည်။
ခရုခွံကလေးတွေ၊ ဝါးဆစ်ကလေးတွေ၊ ကျောက်ကလေးတွေကို ဖယောင်းကြိုးလေးတွေနဲ့ သီတန်း ရောင်းသည့် ကလေးကြိုက်၊ မိန်းကလေးကြိုက် လက်ဝတ်တန်ဆာတွေ တွေ့ပြန်တော့ မြန်မာပြည်မှာ တပုံကြီး ဒါမျိူးတွေလို့ ရေရွတ်နေပြန်သည်။ ဘောင်းဘီအပွကို ခါးမှာ ပုဆိုးလို ပြန်ပတ်ဝတ်ရသည့် အထည်တွေ တွေ့ပြန်တော့ အင်းလေးမှာ ဒါမျိူးအထည်တွေ အများကြီးတဲ့၊ ရှမ်းအကျ င်္ီလို ရင်ကွဲမှာ ထုတ်သီးတပ် အကျ င်္ီတွေတွေ့ပြန်တော့ တို့ဆီမှာလည်း ပေါမှပေါပါ လုပ်ပြန်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ သက်ပျင်းလေးချကာဖြင့် အော် အာဏာရှင်တွေလက်ထက် နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ် နေခဲ့ကြရတာ တို့ပြည်သူတွေ လုပ်ခွင့် ဘာမှမရကြပါလား၊ ဒီအစိုး၇တွေ ဒီလိုလေးတွေ လုပ်ပေး၇င် ပြည်သူတွေ တော်တော်အဆင်ပြေမှာလို့ ပြောရင်း မြန်မာပြည်မှာ ပိုက်ဆံရှာရခက်သလောက် ဒီမှာ ကြည့်ပါအုန်း ဈေးသည်တွေ ရောင်းရလိုက်တာ၊ တန်ဖိုးအကြီးကြီးတွေလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဘတ်(၂၀)၊ ဘတ်(၃၀) တန်က စလို့ တစ်ရာ နှစ်ရာ အစားစား လူတိုင်းဝယ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာလေး လုပ်ပြီး ဒေသထွက်ကို လှလှပပလေး အလှဆင်ရောင်းကြတာ အားကျလိုက်တာနော်တဲ့။
တိုင်းပြည်မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သစ်တွေ အလုံးလိုက်၊ ကျောက်စိမ်းတုံးတွေ အတုံးလိုက် ရောင်းမှ ပိုက်ဆံ ရှာတတ်တဲ့ အစိုးရကို သိစေချင်လိုက်တာ၊ အင်း သိမှာပါပဲလေ သူတို့က ပြည်သူကို ကြည့်တာမှမဟုတ်တာ စသဖြင့် သူခံစားရတာ တတွတ်တွတ် ပြောပြနေလေသည်။
ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ တရုတ်မလေး တစ်ယောက်က အကျ င်္ီတစ်ထည်ကို ဝတ်ကြည့်လိုက် အဖော်ပါသည့် သူ့ကောင်လေးကို ဘယ်လိုလဲ မေးလိုက်၊ နောက်တစ်ထည် စွပ်လိုက်၊ ပြန်ချလိုက်၊ ရွေးလိုက် လုပ်နေတာကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက
" အင်းးးးးးး မြန်မာပြည်မှာဆို အအော်ခံရပြီ၊ ဝယ်မှာလား၊ မဝယ်ဘူးလား၊ ဒါမှမဟုတ်တောင် အနည်းဆုံး မျက်နှာ ပုပ်ပြီး ကြည့်နေလောက်ပြီ ၊ ကြည့်ပါအုန်း ဈေးသည်က အပြုံးမပျက်တဲ့ အပြင် သူတို့ကို စောင့်တောင်ကြည့်မနေဘူး " ပြောရင်း ပြည်သူတွေမှာပါ ဒီလိုစိတ်ကလေးတွ ရှိဖို့ လိုနေသေးတယ်နော်လို့ ပြောပြန်လေသည်။
ကီးချိန်း( သော့တွဲ) လေးတွေ ရောင်းသသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင် အရောက် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက သဘောကျကာ ဝယ်ဖို့ပြင်လေသည်။ ချင်းမိုင်- ထိုင်း( Chiang Mai- Thailand) စာတန်းပါ ပြီး အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ စာလုံးတစ်လုံးဆီ ကပ်ထားသေးရာ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးဖို့ ကောင်းလေသည်။
ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ သူရဲ့ နာမည်အစ စာလုံးလေးတွေရှာပြီး ရွေးဖို့ ပြင်တော့ ဆိုင်ရှေ့မှာ နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦး အကျအနထိုင်ကာ ရွေးနေတာ ကြည့်မိသည်။ သူတို့က ကီးချိန်းတစ်ခုမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံး နှစ်လုံးကို တွဲပြီး လိုချင်သည်ဟု ဆိုရာ ဆိုင်ရှင်က သူတို့လိုချင်သည့် စာလုံးတွေ ရှာပြီး ဆူပါဂလူးနှင့် နှစ်လုံးတွဲ ပြန်ကပ်ပေးနေလေသည်။ ဆယ်ဂဏန်းမျှသာ တန်သည့် ထိုကီးချိန်းကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြန်ထုတ်ပြန်ကပ် လုပ်ပေးတာကို ကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက တို့ဆီမှာ သောင်းဂဏန်း သိန်းဂဏန်းတန် ဝယ်တာတောင် စိတ်မရှည်ကြဘူး။ ဈေးကများတော့ ပစ္စည်းလေး စစ်ကြည့်ပါရစေ ဆိုတာတောင် ဆောင့်ဆော့င့်အောင့်အောင့်။
စာရေးသူမှာ သူပြောသမျှ ရယ်မောရင်း တချိန်က ဒီဈးမှာ လျှောက်ရင် အမိမြန်မာပြည်ကို သတိရတာအပြင် မြန်မာတွေ ဒီလို ပိုက်ဆံရှာလို့ ရစေချင်တာတွေ ၊ ဒီကလူတွေလို အများနှင့်လိုက်လျောညီထွေ ၊ ဝယ်သူ့အလိုကျ တန်ဖိုးနည်းသည် များသည်မဟူ စိတ်တိုင်းကျစေ၇န် စိတ်ထားတာတွေကို မြန်မာပြည်ကလူတွေကို ဖြစ်စေချင်တာမှန်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပြန်မြင်လာသည်။
" တကယ်တန်းက အခုလို အခြေခံတူပြီး ကွာခြားသွားရတာ အုပ်ချူပ်တဲ့ လူကြောင့် ၊ အဲဒီ စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်၊ သူတို့ မသိမတတ် စေတနာမပါပဲ လုပ်လို့ ပြည်သူတွေ နစ်နာရတာ၊ သူများတိုင်းပြည်ကလူတွေလို ဒီလို မနေရတာ၊အဓိက တရားခံက အစိုးရပဲ၊ တို့ပြည်သူတွေဟာ တော်တော်အသုံးမကျတဲ့ အစိုးရကို ရလို့ ဒိလိုဖြစ်ရတာ" လို့ အပြန် ကားပေါ်ရောက်သည်အထိ တတွတ်တွတ်ရွတ်လေသည်။
ကဲ သူငယ်ချင်း ဒါဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲလည်း နီးလာပြီ၊ သူငယ်ချင်း ဘယ်သူ့ကို ရွေးရမယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းဆုံးဖြတ်ပြီးပုံပဲ လို့ စာရေးသူက အကဲစမ်းလိုက်ရာ " သူများတိုင်းပြည်မှာ ပြည်သူကို အဆင်ပြေအောင်၊ ဝင်ငွေတိုးအောင် ဘယ်လို စီမံပေးရတယ်ဆိုတာ သူတို့အစိုးရက သိတယ်တွေ့တယ်မဟုတ်လား၊ ဒီတော့ ကိုယ်တို့လည်း ပြည်သူ့ အကျိူးကို လုပ်ပေးမယ့်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝနဲ့ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းတွေ မြှင့်တင်ပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်မျိူးကိုပဲ ရွေးမှာပေါ့၊ ဒါမှ တို့ပြည်သူတွေ လူလူသူသူ နေရမှာ၊ အနည်းဆုံး ဈေးရောင်းစားတောင် မပင်မပန်း လူချင်းတူသူချင်းမျှ ရောင်းနိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိူး ဦးဆောင်မှ ဒီလိုဘဝတွေက လွတ်မယ်။
စနေဈေးမှာ လမ်းလျှောက်တိုင်း ခံစားရသည့် စာရေးသူရဲ့ ခံစားမှုသည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူထံ ကူးပြောင်းရောက်ရှိသွားလေသည်။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 12:03 AM No comments: